नाग संस्कृतिको सौन्दर्य- विविधा - कान्तिपुर समाचार
नाग संस्कृतिको सौन्दर्य
पूजा गर्ने विधि र प्रक्रिया फरक हुन सक्छ । दिन अलग–अलग हुन सक्छ तर नागलाई अधिकांश नेपालीले आआफ्नै भाव, श्रद्धा र भक्तिअनुसार पूजा गरेकै छन् ।
श्रावण ३१, २०७५ भवानीश‌ङ्कर भट्टराई
काठमाडौँ — सामान्यत: सर्प र नागलाई एउटै प्रजातिको भनिन्छ । शास्त्र अनुसार भने सर्प पृथ्वीवासी हो भने नागचाहिंँ पाताल निवासी । त्यसैले यी दुई आकार, स्वभाव, गुण आदि सबै दृष्टिले फरक–फरक हुन् । सर्पलाई लम्बाकार सरीसृप तथा नागलाई चाहिँं अर्धसरीसृप र अर्धदेवाकृति भएको नृसिंहजस्तै विलक्षण मानिएको छ ।
कतिपय अध्येताले कोब्रा, राजगोमन, भाइपर आदिलाई सर्पराज वा नागराज भन्ने गरेका छन् । यो स्वीकार्दा नाग सर्पहरूको राजा हो भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । तर हामीले नागचित्रमा देखेको नाग यस भूमण्डलमा कतै पाइएको छैन । तसर्थ पौराणिक गाथाहरूमा मात्र सीमित नाग सर्पको सम्मानवाचक दैविक पदवी हुनुपर्छ ।
जसरी श्रद्धापूर्वक प्रयोग गरिँदा भातलाई प्रसादी/प्रसाद भनिन्छ । जसरी शिवलिङ्गमा भक्तिपूर्वक चढाइँदा पानीलाई जल भनिन्छ । त्यसरी नै सर्पलाई सम्मान गरिँदा नाग भनिएको हुुनुपर्छ । कतै सर्प निस्कँदा नागदेवता प्रकट भएका छन्, उनलाई वासस्थानमा जान दिऔं भन्ने चलन अद्यापि छँदैछ । यो सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले सर्पलाई हीन जाति मानेर पातालमा गई बस्न अह्राएको पौराणिक प्रसङ्गबाट पनि पुष्टि हुन्छ । त्यसैले सामान्य कथनमा सर्प तथा सम्मानमा नाग प्रचलित भएको हो, बुझ्न सकिन्छ ।
डराएर होस्, खेतको संरक्षक ठानेर होस्, वर्षा र सहकालका देवता मानेर होस् अथवा खाद्यचक्रको अभिन्न अङ्ग सम्झिएर– नेपाली समाजले परापूर्व कालदेखि सर्पलाई नाग भनेर पूजा गर्दै आएको छ । के हिन्दु ? के बौद्ध ? के किराँत ? के जैन ? सबै समुदाय कुनै न कुनै कोणबाट नागसम्मान र पूजाको संस्कृतिसँग अभिन्न भएर गाँसिएका छन् । हिन्दुहरू नागपञ्चमीमा दुग्धस्नान एवं अन्य विविध विधिबाट धुमधामसँग नागपूजा गर्छन् ।
राईहरू आफ्नो खेतीबाली सप्रियोस् भनेर भूमिपूजा (साकेवा) गर्दा सर्वप्रथम नायुमा अर्थात् नागको पूजा गर्छन् । लिम्बुका पुरोहित फेदाङ्वाले भूमिपूजा गराउनु अघि असेक साम्माङ (सर्पदेवता) को पूजा गर्न लगाउँछन् । गौतम बुद्ध आफ्ना चेलाहरूलाई ज्ञानोपदेश दिने क्रममा बोधिवृक्षमुनि रहँदा उनका शिरमा नागराज पुलिन्दाले छाया दिएको कथा छ । जैन तीर्थङ्करहरूका शिरमा सर्पाकार मुकुट देखिन्छ । यी नागपूजा संस्कृतिकै परिणति हुन् । मङ्गोल समुुदायका भोटे, तामाङ, गुरुङ आदिले वर्षचक्रको नाम राख्दा पशु प्राणीलाई आधार मान्ने गरेका छन् । त्यस क्रममा सर्प, गरुड, मुसो, बिरालो आदि १२ प्राणीबाट १२ संवत्सरका नाम जुराएका छन्, त्यसभित्र सर्प वर्ष पनि पर्छ । यसरी पुरै एक सालको नाम सर्पवर्ष राख्नु यसप्रतिको सम्मान हो ।
पूजा गर्ने विधि र प्रक्रिया फरक हुनसक्छ, पूजा गर्ने दिन आ–आफ्नै संस्कृति र चलन अनुसार अलग हुनसक्छ, तर पनि नागलाई अधिकांश नेपालीले आ–आफ्नै भाव, श्रद्धा र भक्ति अनुसार पूजा गरेकै छन् । यो सबै नाग (सर्प) ले मानिसहरूमा लगाएको गुनको परिणाम हो । धेरै नेपालीले नागपूजा गर्नाको कारण सर्प खेतको संरक्षक भएर हो ।
परम्परागत नेपाली समाज कृषि प्रणालीमा आश्रित रहनु, सर्पले खेतलाई मलिलो बनाउनु, मुसा–किरा आदि बाली विनाशक प्राणीलाई मारेर/खेदेर भए पनि बाली संरक्षण गर्नु उसलाई श्रद्धा गर्ने कारण हुन सक्छन् । सर्पलाई वर्षा र सहकालसँग जोडेर पनि किसानहरूले श्रद्धा गर्छन् । पूजा नगरिँदा नागहरू रिसाए भने खडेरी पर्छ र बाली सखाप हुन्छ भन्ने मत उत्तिकै छ ।
नेपाली समाज राजा नान्यदेवको पालादेखि नागपूजाको संस्कृतिसँग जोडिँदै आएको पाइन्छ । राजा नान्यदेव आफूलाई नागवंशी मान्थे । लिच्छवि वंशका र मल्लवंशका राजाले पनि नागपूजा संस्कृतिलाई निरन्तरता दिए । ती राजाहरूले राजसिंहासन, महलका टुँडाल, देवल आदिमा नागाकृति खोप्न लगाए । काठमाडौं उपत्यका पहिला नागजातिको शासन रहेको कहावत हुनु, मञ्जुश्रीले उपत्यकाको पानीलाई खड्गले कटाउँदा ती नागलाई टौदहमा सारिनु, प्राचीन सेन वंशावली अनुसार मगरहरूलाई नागवंशी मानिनु, नेपालका शाहवंशीय राजाका सिंहासनमा नागको आकृति रहनुले नेपालमा नागपूजाको परम्परा निकै प्राचीन हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
नागपूजा वैदिककालदेखि चल्दै आएको हो । वेदमा ‘नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्य: सर्पेभ्यो नम:’ (शुक्लयजुर्वेद–१३–६) उल्लेख छ । यसको अर्थ पृथ्वीमा, अन्तरिक्षमा र देवलोकमा रहने सर्पहरूलाई नमस्कार भनिएको हो । यसबाट सर्पहरूको क्षेत्र पाताल वा नागलोक मात्र नभएर पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा देवलोक पनि हो भन्ने पनि बुझिन्छ । साथै वैदिककालमा पनि नागहरू पूज्य रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो परम्परालाई ऋषि–महर्षिहरूले झनै विस्तार गरेका थिए । गरुड, स्कन्द, भविष्य, वराह एवं नारदपुराणमा पनि नाग सम्बन्धी विभिन्न प्रसङ्ग छन् । भविष्य पुराणमा– श्रावण शुक्ल पञ्चमी तिथिमा जुन मानिसले नागलाई दूधले स्नान गराउँछ, त्यसको कुललाई नागले अभयता र प्राण दक्षिणास्वरूप प्रदान गर्छ भनिएको छ ।
पुराण वर्णित् नागपूजाको शास्त्रीय परम्परालाई सिन्धु सभ्यताका अनुयायीहरूले पनि सकारेका छन् । यो कुरा मोहन जोदाडोको उत्खननमा नागमूर्ति पाइएको घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ (मराठी विश्वकोश खण्ड–८ पृष्ठ–४१०) । त्यसैगरी तक्षशिला नाम तक्षक नागका कारणबाट राखिएको, तक्षशिलाका राजा अम्भी नागका उपासक रहेको, पूर्वी भारतको नागाल्यान्डको नाम नागहरूकै कारणबाट जुराइएको, भोट र चीनतिर पनि नागवर्ष मनाउने गरिएको प्रसङ्गहरूले हिमालदेखि सिन्धुघाँटीसम्म नाग संस्कृति फैलिएको बुझ्न सजिलो छ । भारतीय महाद्वीपमा मात्र होइन, मिश्र, बेबिलोन आदिमा पनि नागहरूको पूजा हुन्थ्यो । मिश्र देशमा शेख हरेदी नामक नागको पूजा अहिले पनि हुने गरेको भारतीय लेखिका पुनम नेगीले लेखेकी छन् ।
नेपाल र भारतका विभिन्न जलाशय र ढुङ्गेधारामा अहिले पनि नागका आकृति देखिन्छन् । मानिसहरूले स्थानीय परम्परा अनुसार नागको आकृति/चित्र बनाएर पूजा गर्ने गरेका छन् । परम्परा पानीको मुहान जलाशय आदिमा फोहोर नहोस् भन्ने मनोविज्ञानसँग पनि यो गांँसिएको हुनसक्छ ।
नागपञ्चमी सबै ॐकार परिवारका सदस्यरूको पनि विशेष पर्व हो । आफ्ना बाबु परीक्षितलाई मारेका तक्षक र उनीहरूका शाखासन्तान सबैलाई सखाप पार्ने सङ्कल्पका साथ सर्पयज्ञ सुरु गर्ने जनमेजयको यज्ञबाट त्राहिमाम् भई ब्रह्माजीकहाँ पुगेका आस्तिक मुनिले समस्त नागजातिको जीवन रक्षार्थ प्रार्थना गर्दा प्रसन्न भई ब्रह्माजीले जीवनदान दिनुभई नागलोकसमेत प्रदान गर्नुभएको पौराणिक मिथकमा नागपञ्चमी आधारित छ । यसै दिन नागहरूले प्राणदान पाएकाले त्यस खुुसीको सम्झनामा नागपञ्चमी मनाइएको हो ।
प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०७:५८
फोरजी विस्तारको मुखैमा प्रमुख बर्खास्त
श्रावण ३१, २०७५ विजय तिमल्सिना
काठमाडौँ — नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारलगायत ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बेला प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गरेको छ ।‘कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम नगरेको र काम सन्तोषजनक नभएको’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेको हो ।
‘कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम नगरेको र काम सन्तोषजनक नभएको’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेको हो । टेलिकमले महत्त्वपूर्ण आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने समयमा बर्खास्त परेकामा अचम्मित भएको राजभण्डारी बताउँछिन् । ‘मलाई कामै गर्न नदिई बर्खास्त गरियो,’ उनी भन्छिन्, ‘ममाथि अन्याय भयो । न्याय खोज्छु ।’ टेलिकमका अधिकांश आयोजनाको ठेक्का मूल्यांकन, सम्झौता र कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले बताइन् । आफू गैरराजनीतिक चरित्रको भएकाले टिक्न नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘म खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘कुनै दलसँग म नजिक छैन ।’
राजभण्डारीलाई खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । ‘हाम्रो भन्दा अघिल्लो सरकारले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि गठन गरेको समितिले तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो,’ तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम कार्की भन्छन्, ‘अन्यभन्दा उहाँ प्रोफेसनल लागेकाले नियुक्त गरेका थियौं ।’ सत्तारूढ दलकै पूर्वमन्त्री कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा राजभण्डारीको काम सन्तोषजनक भएको बताए । ‘अहिलेको बर्खास्तीबारे कुनै टिप्पणी गर्दिन,’ उनले भने ।
साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै शुक्रबार कम्पनीका अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङले उनलाई तीनदिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेका थिए । आइतबार स्पष्टीकरण सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता गरेकी उनलाई मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको हो । नेपाल टेलिकम ओरालो लागेकाले राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए ।
अहिले नेपाल टेलिकममा केही ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन हुने क्रममा छन् । यीमध्ये एक हो फोरजी एलटीई नेटवर्क विस्तार । टेलिकमले देशैभर फोरजी विस्तारको लक्ष्यसहित यो परियोजनाका लागि टेन्डर आहवान गरेको थियो । अहिले टेन्डरहरू मूल्यांकन चरणमा छन् ।
पुसमा मूल्यांकनका लागि टेन्डर खोलेलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेन्डर प्रक्रियामा चासो देखाएको थियो । टेन्डरको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारले छानबिन गरिरहेका कारण टेलिकमले मूल्यांकनलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । ‘अख्तियारबाट फुकुवा हुनासाथ यसको टेन्डर प्रक्रिया टुंगिन्छ,’ राजभण्डारी भन्छिन् ।
टेलिकमले फोरजी विस्तारको टेन्डर दुई चरणमा बाँडेको छ । कोर नेटवर्क र नेटवर्क गरी फोरजी विस्तारको काम बाँडिएको छ । कोर नेटवर्क विस्तारका लागि चिनियाँ कम्पनी हुवावे, जेटीई र सिंगापुरको मिभिनिर कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
नेटवर्क विस्तारका लागि जेटीई र चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेस इन्टरनेटसन (सीसीएसआई) ले टेन्डर हालेका छन् । टेन्डर प्रक्रिया पूरा भएको ८ महिनामा कोर नेटवर्कको काम सक्ने र १६ महिनामा नेटवर्क विस्तारको काम देशैभर सक्ने टेलिकमको लक्ष्य छ । ‘फोरजी विस्तारको योजना मेरो पालामा बनेको हो,’ राजभण्डारी भन्छिन्, ‘यसको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा मलाई बर्खास्त गरियो ।’
योबाहेक नेपाल टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्रदेश १ देखि ३ सम्मका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा पाएको छ । अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि सम्झौता गरेको टेलिकमले यसको टेन्डर यसै साता मात्रै आहवान गरेको छ ।
पाँचथरको चियोभज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्नुपर्ने गरी टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको हो । सम्झौताअनुसार टेलिकमले २ वर्षभित्र अप्टिकल फाइबर बिछयाइसक्नुपर्ने थियो । यसबापत प्राधिकरणले टेलिकमलाई ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट ५ अर्ब दिने सम्झौता भएको थियो ।
टेलिकमले अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि यसै साता मात्रै टेन्डर आहवान गरेको छ । ‘सञ्चालक समितिमा पटकपटक टेन्डर स्वीकृतिका लैजाँदासमेत स्वीकृति भएन,’ राजभण्डारी भन्छिन्, ‘त्यसैकारण ढिला भएको हो ।’
सरकारले राजभण्डारीमाथि टेलिकमको एक लाइन विस्तार परियोजनामा समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको आरोप पनि लगाएको छ । राजभण्डारी टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि सन् २०१२ मै यो आयोजना सुरु भएको हो । टेलिकमले मुलुकभर जीएसएम सेवाअन्तर्गत टुजी र थ्रीजी सेवा विस्तार गर्न एक करोड आयोजना सुरु गरेको थियो । यो आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको पूर्वाधारले थप एक करोड ग्राहकको माग थेग्न सक्छन् । परियोजना ए र बी गरी दुई भागमा विभाजित गरिएको थियो ।
यो आयोजनाअन्तर्गत ४८ लाख आयोजनाको काम सम्पन्न भएको र ५२ लाख आयोजनाअन्तर्गतको काम ८० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको राजभण्डारीको दाबी छ ।
वैशाख २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजभण्डारीलाई कार्यसम्पादान सन्तोषजनक नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । राजभण्डारीले उक्त स्पष्टीकरण बुझाएपछि जेठ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई ११ बुँदे निर्देशन दिँदै कार्यसम्पादन सुधार्न निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले दिएको निर्देशनमा एक करोड लाइन विस्तारको आयोजना ६ महिनाभित्र निर्धारित लागत परिणाम र गुणस्तरमा पूरा गर्ने, ल्यान्डलाइन फोनलाई आईपी प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने, फाइबर टु होमको एक लाख लाइन जडान गर्ने काम चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने, मध्य पहाडी लोकमार्गको ठेक्का प्रक्रिया ६ महिनाभित्र पूरा गरी काम सुरु गर्ने, भूकम्प प्रभावित ४ जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने काम असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने बुँदा उल्लेख छन् ।
यीमध्ये अधिकांश बुँदामा आफूले उल्लेख्य काम गरे पनि यसको नतिजा नहेरी बर्खास्त गरिएको राजभण्डारीको दाबी छ । भन्छिन्, ‘भूकम्प प्रभावित जिल्लामा इन्टरनेट विस्तारको काम लक्ष्यभन्दा एक महिनाअघि जेठमै सकिएको हो ।’
नेपाल टेलिकमको ग्राहक, सेवा र नाफामा वृद्धि गर्न नसकेको सरकारी आरोप गलत भएको राजभण्डारीको दाबी छ । आफ्नो कार्यकालमा कम्पनीका ग्राहक र नाफा दुवैमा वृद्धि भएको उनी दाबी गर्छिन् । ‘मैले प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी पाउँदा कम्पनीका ग्राहक १ करोड ५० लाख थिए, अहिले यो १ करोड ९७ लाख पुगेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कम्पनीको नाफामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।’
ओभर दि टप सेवा (भाइबर, स्काइपजस्ता इन्टरनेटबाट कुराकानी गर्न मिल्ने सेवा) का कारण संसारभर नै टेलिकम कम्पनीको भ्वाइसतर्फ हुने आम्दानी घटिरहेको छ । ‘विदेश आउजाउ हुने कलबाट हुने आम्दानी र भ्वाइसको आम्दानी घटे पनि समग्रमा कम्पनी नाफामा छ,’ उनले भनिन् ।
राजभण्डारी प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएकी टेलिकमको पहिलो महिला प्रबन्ध निर्देशक हुन् । उनी २०७३ असोजमा तीन वर्षका लागि टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएकी थिइन् । टेलिकमकै प्रबन्धक सुनील पोखरेल उनीसँगको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा थिए ।
प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७५ ०७:५१
आलो र पालो